सस्तो ICE ट्रेन टिकट र यात्रा मार्ग मूल्यहरू | एक ट्रेन सेव
टीउहाँ जर्मन रेल प्रणालीको प्रमुख ICE ट्रेन जर्मनी भित्र प्रत्येक शहर जोड्दछ.
इन्टर्सिटी-एक्सप्रेस वा यसको सर्टकट नाम आईसीई एक प्रणाली हो उच्च गतिको रेल ड्युश बहन द्वारा स्वामित्व प्राप्त, जर्मनीको राष्ट्रिय रेल प्रदायक. को ICE ट्रेनहरू लक्जरी को लागी परिचित छन्, गति, र सान्त्वना तिनीहरू जर्मनीको प्रत्येक शहरमा जडान गर्दा.
तपाईंको यात्रा र प्रस्थान मिति निश्चित भएकोले तपाईंलाई फिर्ती शुल्कमा पैसा बचत हुनेछ. फिर्ताको दर र अप्रयुक्त ICE टिकट फिर्ताको विकल्प तपाईले किन्नुहुने टिकटको प्रकारमा निर्भर हुन्छ. पनि, रिफन्ड शुल्क मानक भाडा टिकटहरूको भन्दा बचतकर्ता भाडा टिकटहरूको लागि कम छ. नोट गर्नुहोस् कि जब तपाईं आफ्नो टिकट फिर्ता गर्नुहुन्छ DB ले तपाईंलाई नगद फिर्ता गर्दैन. DB रकम फिर्ता DB वाउचर मार्फत गरिन्छ, जुन तपाईं उनीहरूले प्रदान गरेको कुनै पनि सेवाको लागि भुक्तान गर्न प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ. तपाईं पनि बेच्न सक्नुहुन्छ आफ्नो ICE ट्रेन टिकट इन्टरनेट फोरममा अनलाइन यदि तपाईं पैसा फिर्ता प्राप्त गर्न चाहानुहुन्छ भने.
हाम्रो वेबसाइटमा तपाईलाई आईसीई रेल टिकटहरूको सबैभन्दा राम्रो प्रस्ताव राख्नु हुनेछ, एक ट्रेन सेव. हामीसँग युरोप र विश्वमा रेल टिकटको सबैभन्दा धेरै प्रस्तावहरू छन्. हाम्रो अनगिन्ती रेल अपरेटरहरू र सहि एल्गोरिदमसँग, हामी तपाईंलाई सस्तो आईसीई टिकटहरू प्रस्ताव गर्दछौं जुन तपाईले फेला पार्न सक्नुहुनेछ. पनि, हामी ICE बाहेक अरू ट्रेनहरूको लागि सस्तो विकल्पहरू फेला पार्दछौं.
2) सामान शुल्क. तपाईं निश्चित हुन सक्नुहुन्छ कि तपाईं सुटकेसहरूको लागि अतिरिक्त भुक्तानी गर्नुहुन्छ यदि तपाईं हवाइजहाजमा यात्रा गर्नुहुन्छ भने. तथापि, यदि तपाईं आईसीई बाट यात्रा गर्नुहुन्छ भने ब्याज शुल्कहरू तिर्ने ट्रेनहरू अतिरिक्त खर्च हुन्छ यदि तपाईं खरीद गर्नुहुन्छ भने तपाईं गर्नुहुने छैन सस्तो आईसीई ट्रेन टिकट. स्पष्ट गर्न, संग सस्तो आईसीई मूल्य, तपाईंले यात्रा गर्नुभएको कुनै पनि सुटकेसको लागि तपाईंले भुक्तान गर्नुपर्दैन. त्यसले आईसीईलाई सस्तो र उत्तम यात्रा विकल्प बनाउँदछ.
3) ट्रेनहरू बढी वातावरण मैत्री छन्. को ICE ट्रेन पनि बढी वातावरण मैत्री हवाइजहाज भन्दा, जुन वायु प्रदूषणमा योगदान पुर्‍याउँछ. रेल द्वारा यात्रा २० × कम कार्बन उत्सर्जन प्रदूषणयुक्त हुन्छ हवाले यात्रा गरेको भन्दा.
अन्य डिब्बेका लागि टिकटको साथ अन्य ट्रेनहरू विपरीत (मानक, व्यापार, कार्यकारी, आदि) Trenitalia मा जस्तै, जर्मनीको ICE केही फरक छ. त्यहाँ प्रत्येक ICE ट्रेनमा दुई कक्षा हुन्छन् - पहिलो वर्ग र दोस्रो कक्षा. दुबै कोटीहरूका बीचका मुख्य भिन्नताहरू मूल्य हुन्, लचकता, र सेवाहरू प्रदान गरियो.
यो आईसीई ट्रेन मा टिकट र वर्ग कम्पार्टमेन्ट को चिन्ता को रूपमा, कुनै टिकट प्रकार पहिलो श्रेणीमा हुन सक्छ. यसको मतलब त्यो पनि हो सस्तो आईसीई ट्रेन टिकट, सेभर मूल्य, र सुपर स्पार्पिसले पहिलो श्रेणीको सीटहरू खर्च गर्न सक्दछ. तथापि, दुवै वर्गका लागि मूल्य फरक हुन्छ, माथि देखाईएको छ.
ICE को प्रथम श्रेणी लक्जरीको लागि मानक सेट गर्दछ, सान्त्वना, र जर्मन रेलवे प्रणालीमा उत्कृष्ट सेवा. प्रतिद्वंद्वी हवाईजहाजको लागि डिजाइन गरिएको, ICE रेलहरूले लामो दूरीको यात्राको लागि सुविधा प्रदान गर्दछ. यसबाहेक, प्रथम श्रेणी कम्पार्टमेन्ट ट्रेनको एक तिहाइ को बारे मा मेक अप र आईसीई लिई ट्रेन मा निर्भर गर्दछ धेरै भन्दा बढी डिब्बे हुन सक्छ.
दोस्रो श्रेणीका यात्रीहरूले खाना पकाउन चाहन्छन् भने रेष्टुरेन्टमा जानु पर्छ. तिनीहरू आफ्नो सीटबाट अर्डर गर्न सक्दैनन् किनकी यो ICE प्रथम-श्रेणी डिब्बेमा छ. पनि, आईसीई दुबै फ्ल्याक्सप्रेसिस र सेभर भाडामा दोस्रो श्रेणीको टिकटहरू स्वत: सीट आरक्षण सुरक्षित गर्दैन. यदि तपाईं दोस्रो वर्ग मा एक सीट आरक्षित गर्न चाहानुहुन्छ, तपाईंले € of को अतिरिक्त रकम तिर्नु पर्छ. यस्तै दुबै प्रथम श्रेणी र दोस्रो कक्षा यात्रीहरूका प्रत्येक सिटमा विद्युतीय आउटलेट हुन्छ.
जर्मन रेल पास जर्मनी भित्र असीमित यात्राको लागि हो. पनि, यो यात्रुहरूका लागि हो जो यूरोपमा बस्दैनन्, टर्की, र रूस. जर्मन रेल पासका केहि फाइदाहरू समावेश छन्:
जर्मन पासका होल्डरहरूले छनौट गर्न सक्दछन्3गर्न 15 एक महीना भित्र लगातार यात्रा दिनहरु एक पास जब खरीद.
को लागी यात्रा अवधि3दिन3प्रत्येक व्यक्ति प्रति महिना.
ट्रेन कार्यक्रम तय गरिएको छैन, जसले उत्तर दिन गाह्रो बनाउँछ. तथापि, तपाईं बचत गर्न सक्नुहुनेछ ट्रेन ट्रेन होमपेजमा वास्तविक समयमा आईसीई ट्रेन कार्यक्रमहरू पहुँच गर्न. तपाईंको उत्पत्ति र गन्तव्य इनपुट गर्नुहोस् र सबै ICE ट्रेन तालिकामा तत्काल पहुँच प्राप्त गर्नुहोस्. प्रारम्भिक ICE ट्रेन द्वारा छोड्छ6छु, हरेक छोड्ने ट्रेनहरूको साथ 30 मुख्य गन्तव्यहरूको लागि मिनेट.
आगमनको लागि, ICE ट्रेनहरू मा आइपुग्नुहोस् 11 जर्मन स्टेशनहरु र एक स्विट्जरल्याण्ड स्टेशन. पनि, प्रमुख आगमन स्टेशनहरु Oberhausen शामेल छ, डुइसबर्ग, डसेलडोर्फ, कोलोन, फ्रान्कफर्ट एयरपोर्ट (फ्रान्कफर्ट मेन एयरपोर्ट), म्यानहेम, सिगबर्ग, र अरूलाई.
एम्स्टर्डम केन्द्रीय बाट (Centraal डच मा छ र यसको मतलब केन्द्रीय स्टेशन हो), तपाईं फ्र्याf्कफर्ट आउन सक्नुहुन्छ, शहर यूरोपको वित्तीय राजधानीको रूपमा परिचित छ. अरु के छ त, छन् सुन्दर तटहरू, संग्रहालयहरु, र भ्रमण गर्न रेस्टुरेन्टहरू.
साँच्चै, त्यहाँ अविश्वसनीय सुन्दर बोटानिक बगैंचा छन्, पाक मास्टरपीसको विस्तृत दायरा संग रेस्टुरेन्ट, चिडियाखाना, संग्रहालयहरु, र पब रमाईलो गर्न. पनि, यदि तपाइँ निश्चित हुनुहुन्न कुन स्टेशन छनौट गर्ने हो, हाम्रो एल्गोरिथ्म तपाईंलाई छनौट गर्न मद्दत गर्दछ.
त्यहाँ कुनै पनि फ्यान्सी बोर्डिंग प्रक्रियाहरू छैनन्. जब तपाईं स्टेशन मा आइपुग्नुहुन्छ, तपाईंको ट्रेन फेला पार्न सूचक बोर्डहरूमा जाँच गर्नुहोस्. यसबाहेक, तपाईं त्यसपछि ट्रेन पनी कुनै पनि समय यो प्रस्थान गर्नु अघि निर्धारित गर्न सक्नुहुन्छ.